မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ (NCDs) ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ ရောဂါကူးစက် ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲ ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သော လူမှုဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံများတွင် ကြာရှည်စွာ စားသောက်နေထိုင် ထိတွေ့နေရသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါများကို ဆိုလိုပါသည်။ မကူးစက်နိုင်သောရာဂါများစွာရှိသည့်အနက်မှ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ လေဖြတ်ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ နှင့် နာတာရှည် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းနှင့် အဆုတ်ရောဂါတို့အား အ​ဓိကမကူးစက်နိုင်သောရောဂါများအဖြစ် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းတို့မှာ မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ အားလုံး၏ (၈၀%) ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း များ အားလည်း အရေးပါသည့် မကူးစက်နိုင်သော ကျန်းမာရေးပြဿနာအဖြစ် ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် မကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများအား ဦးစားပေးဖြေရှင်းရမည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ပြဿနာအဖြစ် အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါသည်။ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအား အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်း ရေးဌာနခွဲအား ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်တွင် (၂၀၁၅) ခုနှစ်မှ စတင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားအဆင့် မကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၇-၂၀၂၁) အား (၂၀၁၇) ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မကူးစက် နိုင်သောရောဂါများကြောင့် အရွယ်မတိုင်မီ သေဆုံးခြင်း၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းနှင့် သေဆုံးနှုန်း များကို လျှော့ချရန် ဖြစ်ပါသည်။
မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဌာနခွဲလက်အောက်တွင် (၁) ဆီးချို သွေးချိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ (၂)နှလုံးသွေးကြောရောဂါထိန်းသိမ်းရေး၊ (၃) ကင်ဆာရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး၊ (၄) နာတာရှည်အဆုတ်နှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ ကာကွယ်ရေး၊ (၅) အတက်ရောဂါ၊ (၆) ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး၊ (၇) နားလေးရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး၊ (၈) လူထုအခြေပြုမသန်စွမ်းမှုကာကွယ်ရေး၊ (၉) စိတ်ကျန်းမာရေး၊ (၁၀) မြွေကိုက်ရောဂါ ထိန်းသိမ်းရေး(၁၁) ဆေးလိပ်ဆေးရွက်ကြီးတိုက်ဖျက်ရေး စသည့် စီမံချက်(၁၁)ခု သည် အဓိကအားဖြင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အထောက်အပံ့ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများအဖြစ် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားများအား မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ ရှာဖွေကုသခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် လက်စွဲ စာအုပ်များ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ ထုတ်ဝေခြင်း ၊ အသိပညာပေးပိုစတာများ၊ လက်ကမ်း စာစောင်များ ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း၊ လိုအပ်သည့်ဆေးဝါးနှင့် ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေကုသမှုပေးခြင်း စသည်တို့ကို သက်ဆိုင်ရာ စီမံချက်/စီမံကိန်းများ အလိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ ရှာဖွေကုသလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို (၂၀၁၇) ခုနှစ် မေလမှ စတင်၍ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ သွေးတိုး၊ ဆီးချိုရောဂါများ စစ်ဆေးခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေတွက်ချက်ခြင်း နှင့် အခြေခံကုသမှုပေးခြင်း၊ ခံတွင်း ကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ များအား စောစီးစွာ တွေ့ရှိနိုင်ရန် စစ်ဆေး ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းကုသခြင်း တို့ကို ကျေးလက်တောရွာနေ ပြည်သူများအား အဓိကထား၍ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းများကို (၂၀၁၉ ) အစောပိုင်းအထိ နိုင်ငံအဝှမ်း မြို့နယ် (၃၃၀) ရှိသည့် အနက် မြို့နယ် (၂၃၂ ) မြို့နယ်တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ကျန်မြို့နယ်များသို့ (၂၀၁၉) ခုနှစ်အတွင်း တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက် သွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဆေးလိပ်/ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုသည် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ ဖြစ်ပွားခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ရပ် ဖြစ်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ဆေးလိပ်/ဆေးရွက်ကြီး တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်အား ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်း များ၊ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ဆေးလိပ်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျန်းမာရေးမဟုတ်သော နှီးနွယ်ဝန်ကြီးဌာနများအားလုံ၏ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သောက်သုံးမှု ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့အား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ပိုမိုပြည့်စုံကျယ်ပြန့်သော ဆေးလိပ်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း ထိန်းချုပ် မှု ဉပဒေအား အသစ်ထပ်မံ ပြဌာန်းနိုင်ရန်၊ WHO FCTC နှင့် ကိုက်ညီသော အမျိုးသားအဆင့် မူဝါဒများကိုချမှတ်နိုင်ရန်၊ WHO 2030 Strategy ပါရည်မှန်းချက်များအား အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ WHO ၏ MPOWER Policy အား အားဖြည့်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်နေရာများ ထူထောင်ခြင်းကိုအားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်ကြော်ငြာခြင်း၊ အရောင်း မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် စပွန်ဆာပေးခြင်းများအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ မီဒီယာမှတစ်ဆင့် လူထုလှုံ့ဆော် လှုပ်ရှားပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့် ညီလာခံများ ကျင်းပခြင်း၊ ဆေးလိပ်ထုပ်တွင် သတိပေးရုပ်ပုံနှင့် စာသားများ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်း၊ ‘WHO FCTC investment case’ သုတေသနဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သုံးစွဲမှုကြောင့် ရရှိလာသော ရောဂါဝေဒနာများကြောင့် ထိခိုက်စေမည့် လုပ်အား နှင့် ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှုများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်၍ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများအား ပြည်တွင်း နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်၊၊
မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး စီမံချက်များသည် မကူးစက်နိုင် သောရောဂါများကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဌာန (ဗဟို) နှင့်ပူးပေါင်း၍ မူဝါဒများ ပြန်လည်သုံးသပ် ခြင်း နှင့် ရေးဆွဲခြင်း ၊ မဟာဗျူဟာများချမှတ်ခြင်း၊ ပဏာမ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နှင့် ဆေးရုံများတွင် အရည်အသွေးပြည့်မီသော ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အရည်အသွေးမြှင့်တင်သည့် သင်တန်းများပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး သတင်း အချက် အလက်များ ကောက်ယူခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် လက်စွဲစာအုပ် များ၊ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ဝေခြင်း ၊ အသိပညာပေး ပိုစတာများ၊ လက်ကမ်း စာစောင်များ ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း၊ အခြေခံဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
Non-communicable Disease Control Unit
Non-communicable diseases (NCDs) areagroup of diseases that are not spread by microbial agents, generally chronic, and required life-long treatment to prevent complications and mortality. While many diseases are included in NCDs, WHO categorizes cardiovascular diseases Ischemic heart disease, hypertension and stroke, diabetes, cancers and chronic respiratory diseases as major NCDs which account for more than 80% of burden due to all NCDs. In the context of Myanmar, the national consensus is to include some key mental disorders and injuries asapart of the NCDs that need to be addressed on priority.
Ministry of Health and Sports in Myanmar has consistently focused on addressing NCDs and NCDs have been recognized as public health priority in NHP (2017-2021). A dedicated unit for NCD was established under Department of Public Health since early 2015 so as to accelerate NCD prevention and control activities in country with public health approaches. National Strategic Plan for Prevention and Control of NCDs (2017-2021) was launched in 2017. The main objective was to prevent and reduce premature death, mortality and morbidity due to non-communicable disease.
Eleven NCD related projects have been implementing with technical and financial support mainly from WHO: 1.Diabetes, 2. Cardiovascular diseases, 3. Cancer , 4. Chronic Respiratory Diseases, 5.Tobacco Free Initiative, 6.Epilepsy (Myanmar Epilepsy Initiative), 7. Injury, 8. Community Based Rehabilitation, 9. Snake Bite Control, 10. Mental Health and 11. Deafness prevention and control projects. Activities include capacity building of health staff, advocacy, awareness raising activities, provision of services, monitoring and evaluation, provision of tools, manuals and IEC materials for health staff, provision of necessary essential medicine and equipment for respective project areas.
The major achievements being; package of essential intervention of non-communicable diseases which has been started since May 2017. The interventions include screening of Hypertension, Diabetes, CVD Risk and treatment of uncomplicated cases, early detection and referral of oral, breast and cervical cancers by BHS and mainly target to people ad especially living in rural area. It has been introduced in 232 townships out of 330 townships in early 2019. It will be expended to cover all the townships by the end of 2019.
Tobacco is one of the major risk factors for NCDs and MOHS has been prioritizing Tobacco Control Program and tightening coordination and collaboration with UN organizations, international and national organizations. To strengthen non-health sector involvement, Central Tobacco Control Committee has been reformed for involvement of non-health sectors which are crucial for majority of Tobacco Control Activities including law enforcement. Myanmar has planned to developanew comprehensive Tobacco Control Legislation, National policy and action plan in line with WHO FCTC and to fulfill the objectives set in FCTC 2030 strategy. For reinforcing WHO MPOWER policy, in collaboration with international and national organizations, MOHS has been conducting activities concerning with area for strengthening smoke free area development, TAPS Ban, awareness raising media campaign and national conference, warning dangers of Tobacco by implementing PHW, FCTC investment case study asaconcrete evidence on how much tobacco has its burden on Myanmar.
Programmes of major NCDs, in collaboration with NCD (central), have been reviewing and revising policy of concerned areas, developing strategic plan and plan of action, implementing activities for capacity building of health staffs for provision for quality services in both primary health care level and at the hospital settings, for better data management, reporting and recording, production and supply of training manuals, guidelines, SOPs, IEC materials and essential medicine and equipment, research and studies.
Office 47, Nayphitaw